ख्रीष्टियनहरूको पुन जन्म भन्नको अर्थ के हो?
ख्रीष्टियनहरूको पुन जन्म भन्नको अर्थ के हो? बाइबलबाट लिईएको एक उत्कृष्ट दृष्टान्त ले यस प्रश्नको उत्तर युहन्ना ३:१-२१ ले दिदछ। प्रभु येशू ख्रीष्टले निकोदेमस, प्रमुख फरिसी र यहुदीका एक महासभाका सदस्यलाइ भन्नु भयो । निकोदेमस राति येशू कहाँ आए र केहि प्रश्न गरे?
जब येशू निकोदेमससगँ कुरा गरिरहदा, उहाँले भन्नु भयो, "‘साच्चै म तिमीलाई भन्दछु, कोही नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्य देख्न सक्दैन।' 'निकोदेमसले उहाँलाइ भने, मानिस बुढो भए पछि कसरी जन्मन सक्छ र?' ‘के त्यो आफ्नो आमाको कोखमा दोस्रो पटक पसेर जन्मन सक्छ र!' येशूले जवाफ दिनु भयो, 'साच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, कोही पानी र आत्माद्वारा जन्मेन भने परमेश्वरको राज्यमा पस्न सक्दैन। शरीरवाट जन्मेको शरीर हो, तर पवित्र आत्माबाट जन्मेको आत्मा हो।' मैले तिमीलाई नयाँ गरी जन्मन पर्छ भन्दा अचम्म नमान, "त्यसैले तिमी नयाँ गरी जन्मनु पर्छ"" (युहन्ना ३:३-७)।
"पुन जन्म" भन्ने शब्दको अर्थ "माथी बाट जन्मनु हो।" निकोदेमसलाई साच्चिकै आवश्यक्ता थियो। पवित्र आत्माद्वारा उहाँले अफ्नो — हृदय परिवर्तन गर्न आवश्यक थियो। नयाँ जन्म, पुन जन्मनु, परमेश्वरको यस्तो कार्य हो, जसले उहाँ माथि विश्वास गर्छ उसलाई अन्नत जीवन दिनेछ (२ कोरिन्थी ५:१७; तितस ३:५; पत्रुस १:३; १युहन्ना २:२९; ३:९; ४:७; ५:१-४; १८)। युहन्ना १:१२,१३ ले यो संकेत गर्दछ कि येशू को नाउँमा विश्वास गरी “पुन जन्म” लिएमा हामी परमेश्वरका सन्तान हुनेछौँ।
यहाँ तर्क पूर्ण प्रश्न आउन सक्छ, "मानिस पुन किन जन्मनु आवश्यक छ?" प्रेरित पावलले एफिसी २:१ मा भनेका छन्, "तिमीहरू आफ्ना अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो" (न. बी. एस, बाइबल)। उनले रोमीलाई लेख्छन, "किनकी सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमासम्म पुग्नवाट चुकेका छन्" (रोमी ३:२३)। पापीहरू आत्मिक रूपमा "मरेका" हुन्छन; जब तिनीहरूले येशू ख्रीष्टमा विश्वासद्वारा आत्मिक जीवन प्राप्त गर्छन्, बाइबलले पुन जन्मको बारेमा भन्छ, यदि कोही पुन जन्मिनछन् भने उसले पापको क्षमा पाउने छ र परमेश्वरसँग सम्बन्ध रहने छ।
यो कसरी हुन सक्छ? एफिसी २:८ ले भन्छ, "किनभने अनुग्रहबाट, विश्वासद्वारा तिमीहरूले उद्धार पाएका छौँ— र यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो त परमेश्वरको वरदान हो— कर्महरूद्वारा होइन, नत्रता मानिसले घमण्ड गर्नेछ।" "जब कोही बचाइन्छ भने, उ आत्मिक रूपमा नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ, र नयाँ जन्म द्वारा परमेश्वरको छोरा-छोरी कहलाइन्छ। जसले येशूमा विश्वास राख्छ, जब उहाँ क्रुसमा मर्नु भयो, तब सबै पापको मोल उहाँले तिर्नु भयो, "पुन जन्मनु" पर्छ भन्नको अर्थ यहि हो।" "यसकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। पुरानो बितिगएके छ, हेर, नयाँ आएको छ!" (२ कोरिन्थी ५:१७)।
प्रभु येशू ख्रीष्ट लाई मेरो मुक्तिदाता भनि कहिल्यै विश्वास गर्नु भएको छैन भने, के तपाईं पवित्र आत्मालाई स्वीकार गर्न तत्पर हुनुहुन्छ कि उहाँले तपाईंको हृदयमा बोल्नु हुन्छ? तपाईं पुन जन्मनु अवाश्यक छ। के म आज ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि हुन चाहन्छु भनि यो प्रार्थना गर्नुहुन्छ? "तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे उहाँको नाउँ माथि विश्वास गरे, उहाँले तिनीहरूलाइ परमेश्वरका सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो। तिनीहरू रगतद्वारा, शारिरीक इच्छाद्वारा, र कुनै मान्छेको इच्छाद्वारा होइन तर परमेश्वरबाट जन्मिका हुन्छन्" (युहन्ना १:१२-१३)।
यदि तपाईं प्रभु येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्न र पुन जन्मनु चाहनु हुन्छ भने, यहाँ एक प्रार्थनाको उदाहरण छ। यो प्रार्थना गर्नाले वा अरू कुनै प्रार्थनाले तपाईंलाई बचाउन सक्दैन। येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर मात्र पापहरूको क्षमा पाइन्छ। यो प्रार्थना केवल तपाईंको विश्वासलाई प्रभुमा व्यक्त गर्न र तपाईंलाई क्षमा दिनुभएकोमा धन्यवाद चढाउनु हो। “प्रभु, म जान्दछु कि मैले तपाईंको विरूद्धमा पाप गरेको छु, र सजाय पाउने योग्यको छु। तर येशू ख्रीष्टले त्यो सजाय भोग्नुभयो जसको म योग्य थिए, ताकि उहाँमा विश्वास गरेर मेरो क्षमा हुन सकोस्। मुक्तिको लागि म मेरो भरोसा तपाईंमा राख्दछु। तपाईंको अचम्मको अनुग्रह र क्षमादानको निम्ति तपाईंलाई धन्यवाद! आमिन!”